Mune ramangwana taigona kushandisa iyo iPhone kunyangwe nemagirovhosi | IPhone nhau
Mazuva ano, kana tembiricha yatanga kudzika kwenguva yakareba, isu tese tinoda kuve nemaoko edu akadzivirirwa kana tichifamba kunze kwemba. Tinogona kuisa maoko edu muhomwe, asi izvi zvinogona kunge zvisina kukwana kana isu tinogona kungosarudza kupfeka magurovhosi. Tikatakura magiravhusi uye iPhone, isu tine dambudziko: isu hatizokwanise kubata iyo skrini nekuti iyo iPhone pani inongoona nzvimbo dzakafanana neganda, asi izvo zvinogona kuve nemazuva ayo akaverengwa
Nhasi zvave kuchizivikanwa kuti Apple iri kushanda pasisitimu iyo yaizoziva mamwe marudzi enzvimbo. Iyo patent akagamuchira zita re «Glove kubata kubata»Uye inotsanangura chirongwa icho, pamusoro pekutsvaga kuwanda kwenzvimbo inobata chinovhara, chingave chinokwanisawo ona mabatiro aunoita Muizvi. Sezvo ini ndinonzwisisa rondedzero, iyo skrini yaisazoita nezvekubata netsaona, asi yaizoita kana imwe nzvimbo isiri chigunwe ikabata iro repamberi pepaneru semunwe.
Kana iyi patent ikauya pachena, Apple haizove yekutanga kuvhura skrini inogona kubatwa nemagirovhosi. Yakave nguva yakareba kubvira Nokia payakatanga Lumia yayo neaya maficha pachiratidziri chayo asi, sezvatinogona kuona kubva mukutengesa kwezvinhu izvi, hachisi chinhu chichaita kuti titore chinhu chimwe kana chimwe. Icho chinhu chaicho chinopa poindi yekunyaradza, asi hachisi chinhu chakanyanya kukosha. Zvisinei, ndine chokwadi chekuti vazhinji venyu muchafunga zvakafanana nezve iyo 3D Kubata skrini (kana kunyangwe kuti haina kukosha). Vanhu vakasiyana, mazano akasiyana.
Sezvatinogara tichitaura, kuti isu tinoziva patent hazvireve kuti ichaverengerwa mune chimwe chigadzirwa, asi zvinotibatsira kuti tizive nekambani iri kushanda. Ini handisi munhu anowanzo pfeka magirovhosi, asi ndine chokwadi chekuti kune vazhinji vashandisi vanogashira iPhone nerudzi urwu rwechidzitiro nemaoko akazaruka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Mune ramangwana taigona kushandisa iyo iPhone kunyangwe nemagirovhosi
Mune ekumusoro-soro Samsung Galaxy ivo vatove nechimwe chinhu chakafanana, zvazvinoita kuwedzera kunzwisisika kwekubata. Nemagirovhosi kana chero mhando yenguwo inoshanda zvakakwana. Iyi ficha inogona kumisikidzwa kana kuremedzwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Right, mukoma wangu ane iyo Galaxy S5 uye usingaone godo rakandiwana nguva yadarika yechando paakashandisa nhare ine magirovhusi uye ini handina kukwanisa kuishandisa neiyo iPhone 6
Pindura kuna J
???? Asi izvo zvavari kutaura nezvazvo, chinyorwa ichi chekare kwazvo, vanotaura nezve nharembozha uye Samsung maseru uye negodo uye handizive kuti yakawanda sei hahaha Makore maviri apfuura zvakabuda seizvi uye kune girovhosi zvinhu zvinogona kushandiswa nechero yekubata skrini.
PwnTunes, gadzirisa raibhurari yako yemimhanzi isina iTunes [Jailbreak + Windows]